Cadaaladd Daradii Laga Dhaxlay Cabdimajiid Goormay Dhamaan Doontaa? – Rasaasa News
May 5, 2011 Cadaaladd Daradii Laga Dhaxlay Cabdimajiid Goormay Dhamaan Doontaa?, Heshiiskii nabadeed ee dhexmaray dawlada Itobiya iyo ururadii la dagaalamayey, waxay aqoonleyda u dhalatay degaanka Somalida Itobiya quudaraynayaan in ay dhamaato cadaalad daradii laga dhaxlay Cabdimajiid. Waxaana maanta laga sugayaa xukuumada in ay dib ugu soo celiso degaanka S
Raadadka Cadaalad darada ee laga dhaxlay Cabdimajiid, waxaa ugu horeeya nidaamka qaybinta xubnaha baarlamaanka heer degaan iyo heeer federal iyo tira koobka dadka degmooyinka degaanka Somalida Itobiya, oo ay cadaalad daro badani ka jirto. Haatan waxaa la gaadhay xiligii ay dhamaan lahayd cadaalad daradii uu abuuray Cabdimajiid, mar hadii ay nabad galiyo ka dhex dhacday dawlada iyo Jabhadihii hore ula dagaalamayey.
Arinta cadaalad darada ee qaybinta xubnaha baarlamaanka iyo dastuurka degaanka Somalida Itobiya, ayaa bilowday sanadkii 1994, ka dib, colaadi dhex martay dawlada Itobiya iyo ururka ONLF, colaadaas oo dhamaatay dhamaadkii sanadkii 2010. Ururka ONLF waxaa uu qotomiyey markii ugu horaysay taariikhda maamulka degaanka Somalida Itobiya sanadkii 1993. Nasiib daro waxaa ONLF, colaad galiyey Cabdimajiid oo ururka TPLF, oo talada Itobiya hayey uu aaminsanaa. Arimaha cadaalada ka fog ee uu sida cadowtinimada ah Cabdimajiid ugu talogalay beesha degaanka ugu badan ee Ogaden, isaga oo xiligaasi ka dhaadhiciyey xukuumada Itobiya ee maanta jirta, oo aan xiligaas waayo arag ahayn.
Arimaha naxdinta leh ee uu cabdi majiid sameeyey waxaa ka mid ah; in baarlamaanka degaanka oo ahaa 25 xubnood sanadkii 1993 uu laba ka mid ah dib ugu celiyey degaanka Tigray oo ilaa iyo maanta uu degaanka Somalidu ku leeyahay 23 xubnood baarlamaanka federalka.
Waxaa kale oo uu Cabdimajiid ka dhaadhiciyey xukuumada in beelo badan ay degaanka degaanka Somalida Itobiya, sida kaliya ee beelaha lagu qancin karaana ay tahay in beeshu ha yaraato ama ha badnaatee hal xubin laga siiyo baarlamaanka federalka ee Itobiya. In degmooyinka ay degaan beelaha yar la badiyo xubnaha baarlamaanka iyo in la badiyo tira dadka degmooyinka beelaha tirada yar, dhinaca kalena in la yareeyo tirada baarlamaanka iyo tirada dadka degmooyinka ay degto beesha Ogadeen.
Arimahaas oo aad uga fog cadaalada iyo dimoqraadiyada ayuu Cabdimajiid ka sharciyeeyey degaanka Somalida Itobiya. Tusale, beesha Isaaq hadii laga helo gabal, tirada ay doonto ha lahaatee waa in ay heshaa xubno baarlamaan oo la egg beesha gabalkaas leh [1:50,000 tiro siman].
Arimahaas foosha xun ee uu sameeyey Cabdimajiid xukuumada Itobiya way ku raacday, sababta oo ah Ogadeen baa dagaal ku jira. Degmooyinka xiga xuduuda Somaliya waxaa soo buuxdhaafiyey dad Somali ah oo qaxootinimo ku soo galay degaanka Somalida Itobiya, Tusaale waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee Harta-sheekh oo markii ugu horaysay la dagay sanadkii 1988, dagaalkii waqooyiga galbeed Somaliya. Buugta tira koobta Itobiya [ethiopian central statistics authority] waxaa ku qoran in tirada dadka ku nool degmada Harta-sheekh ay ka badan tahay isku darka degmooyinka gabalka Jarar oo dhan. Miyeyna arintaasi cadaalada aad uga fogayn? Mise qancin kartaa ururada nabada qaatay iyo beesha balaadhan ee Ogadeen.
Degma kasta, oo ah degmooyinka ay degaan beelaha ku tirada yar degaanka Somalida Itobiya, waxay ka baarlamaan badan tahay degmooyinka gabalka ay degmadaasi ka tirsan tahay. Tusale Degmada Harta-sheekh, tirada baarlaamka ee ka soo baxdaa waa 8 xubnood, degmada Dhagaxbuur iyo Dhagaxmadowna waa 7 xubnood. Cadaalad iyo dimoqraatiyad midna ma aha!
Arimaha foosha xun ee uu Cabdimajiid galiyey diiwaanka dawlada Itobiya waxaa ka mid ah, in degmooyinka degaanka uu mid walba beel siiyey isaga oo sheegay qabiilka leh degmada sida; Harta-sheekh Isaaq, Dhooboweyn Daarood, Shiniile Dir, Dhagaxle Hawiye, Danood Daarood, iwm.
Xukuumada Itobiya ee haatan jirta oo aan waayo arag ahayn xiligaas, waxaa dhinaca Somalida indho u noqday Cabdimajiid oo dhagar darteed ka dhaadhiciyey xukuumada in Ogadeenka laga tirtiro degaanka Somalida Itobiya. Xukuumada Itobiya oo aad ula dagaalantay Ogadeenka aakhiritaankii waxay aqoonsatay in aan la tirtiri karin dad, sanooyin ka dibna waxay ku baaqday nabada maanta ka dhalatay degaanka Somalida Itobiya.
Heshiiskii nabadeed ee dhexmaray dawlada Itobiya iyo ururadii la dagaalamayey, waxay aqoonleyda u dhalatay degaanka Somalida Itobiya quudaraynayaan in ay dhamaato cadaalad daradii laga dhaxlay Cabdimajiid. Waxaana maanta laga sugayaa xukuumada in ay dib ugu soo celiso degaanka Somalida Itobiya cadaaladii lagu dhisay dawladii ugu horeysay ee degaanka Somalida Itobiya ee sanadkii 1993.
Fiiri Cadaalad darada Liiska wakiilada Somalida ee gabalada.
Fiiri tirakoobta degmooyinka laga xushay Degaanka Somalida Itobiya, Daroor iyo Harta-sheekh